Sheekh Maxamed Idriis oo booqanaya magaalooyin badan oo Iswiidhan ah | Somaliska
Ugu horeyn mahad oo dhan Ilaah baa leh Nabad iyo Naxariisina Nebigeenna Korkiisa ha ahaato. Waxaa booqasho ku jooga wadanka Iswiidhan sheekha soomaaliyeed ee caanka ah, waa Sheekh Maxamed idriis. Sida lala wada socdo shiikhu waa daaci, waxaana uu tagaa meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala duwan ah. Meelahaas oo uu kusoo booqdo guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaana dadka soomaaliyeed. Wadamadii ugu dameeyey ee uu sheekhu soo marayna waxaa ka mid ahaa Kenya, koonfur Afrika, Sucuudi carabiya, Maleeshiya,Norway iyo Finland. Haddaba sida aan kor kusoo sheegnay wakhtigaan xaadirka ah ( 18/5, 2011) waxaa uu sheekh Maxamed Idriis joogaa wadanka Iswiidhan. Sheekha oo ay la socdaan xubno ka mid ah maamulka masjidka soomaalida ee Stockholm ayaa waxay taariikhda u dhexeysa 14-19 ka maj, booqdeen magaalooyin badan oo Iswiidhan ah. Magaalooyinkaas oo ku kala yaala koonfurta, galbeedka, bartamaha iyo waqooyiga dalka Iswiidhan. Meelaha ay beryahaan cagta soo mariyeen waxaa ka mid ah Göteborg, Malmö, kristianstad, Falkenberg, Borås, Jönköping, Gislaved, Eskilstuna, Norrköping, Borlänge iyo Gävle.. Muddo shan beri gudahood ah ayaa shiikha iyo xubnaha la socdaa waxaa ay isu mareen dhamaan magaalooyinkaas aan kor ku soo sheegnay. Magaalooyinkaas oo run ahaantii aad iyo aad u kala fog. Magaalo kasta oo ay tagaana waxaa ay ku qabanayeen muxaadarooyin kala duwan oo dadka xaqa loogu sheegaayo laguna wacyi gelinaayo muhiimada ay leedahay isku duubnida, wax wada qabsiga iyo iney dadka soomaaliyeed iscafiyaan. Dadka soomaaliyeed ee magaalooyinkaas ku noolina si aad ah ayey uga soo qaybgaleen muxaadarooyinka iyo wacyi gelinta uu soo jeedinaayey sheekh Maxamed Idriis. Magaalada Eskilstuna iyo booqashadii sheekh Maxamed Idriis. 18-ka bisha may 2011 oo ku beegan maalin arbaca ah ayaa shiikhu yimid magaalada Eskilstuna oo ilaa 114 km u jirta caasimada Stockholm. Shiikha waxaa soo dhoweeyey xubno ka socda masjidka Eskilstuna, waxyar oo nasasho ah ka dibna waxa shiikhu tegey masjidka weyn ee faras magaalaha Eskilstuna, halkaas oo ay ku sugnaayeen muslimiin badan oo isugu jirey soomaali iyo jinsiyado kaleba. Shiikhu waxaa uu dadka tujiyey salaadii casarka. Kolkiii la tukadey salaadana waxaa si toos ah u bilaabatay muxaadaradii shiikhu ugu talo galay dadka soomaaliyeed ee reer Eskilstuna. Ugu horeyn waxaa shiikhu muxaadaro gaaban ku jeediyey afka carabiga maadaama taas oo ay codsadeen walaalaha muslimiinta ah ee ku hadla afka carabiga. Intaas ka dib waxaa si toos ah u bilaamay muxaadaradii la sugaayey ee ku baxaysey afka soomaaliga. Muxaarada waxaa si toos ah loogala socdey aalada Palk-ga. Taas oo suurto gelisey in dad badan oo soomaaliyeed oo jooga dunida daafaheeda kala duwan ay ka faaìideystaan casharadaan uu soo jeediyey sheekh Maxamed Idriis. Muxaadarada shiikhu uu ka jeediyey Eskilstuna waxaa ay taabaneysey meelo kala duwan oo nolosha ah sida in dadku is cafiyaan ,qurbaha iyo dhibaatooyinka yaala, waxqabadka dadka, midnimda iyo iskuduubnisa, dhibta aseebtay soomaaliya iyo doorka qurbajooga, Toobada iyo shuruudaheeda iyo waxyaalo kale oo badan. Waxaan halkaan kusoo koobayaa waxyaalihii uu shiikhu ka hadlay.
Qofwalbaa ha iska xalaaleeyo qofka kale: Rasuulkeena suuban nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxaa uu yir: “War dadyahow qofkastaa waa inuu qofka kale iska xalaaleeyaa” Taas oo loola jeedo waa in dadka ay wax kala gaareen iscafiyaan, qof kastana waxaa laga xaarantimeeyey qofka kale dhiigiisa, maalkiisa iyo sharaftiisaba. Diinta islaamklu ma ogola xadgudubka. Qofkii qof kale ka haysta xoolo waa inuu xoolihii celiyaa uuna cafis weydiistaa walaalkiis. Isaguna waa inuu ka aqabalaa cafiskaas. Aakhiro qofku ma haysto maal uu celiyo sidaas darteed waxaa uu qofku bixinayaa qayb ka mid ah xasanaadkiisii oo uu siinaayo qofkii kale ee wax ku lahaa. Haddii xasanaadku dhamaado oo qofku waayo wax uu bixiyona waxaa dusha laga saarayaa qayb ka mid ah denbiga qofka wax laga haystey. Sidaas darteed rasuulku (NNKH) waxaa uu yiri, waa in qofka aad ku xadgudubtey aad ka xalaalowdaa”
Waa in dadku toobadkeen la yimaadaan: Toobadkeenku waxaa uu leeyahay afar shuruudood oo muhiim ah, waana in qofku oofiyaa shuruudahaas si toobadiisu ay u noqoto mid la aqbalo 1. Qofku waa inoo denbiga ka joogaa; waa inaan qofku teebadkeenka dib u dhigin maxaa yeelay lama oga wakhtiga nafta loo imaanaayo. Waa inuu danbigii qofku ku jirey uu halkaas ku joojiyaa, kana baxaa. 2. Qoomamayn: Waa in qofku ka qoomameeyaa danbigii uu galay, waa inuu shalaayaa arinkaas denbiga ah ee uu falay. Qoomamayntu waa toobad ayuu yir rasuulka nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee. 3. Qalbiga oo aad ka goàansato inaadan danbigaas dib ugu noqon doonin. 4. Haddii waxa aad ka toobad keeneysaa uu yahay xaq dad leeyahay waa in qofku celiyaa ama uu masaabax dalbadaa. Ilaahay waa cafiyaa haddii la weydiisto toobad khaalis ah.
Dhibta soomaalida haysata- ilaahay aan u toobad keeno!! Shiikhu waxaa uu aad u iftiimiyey dhibaatada aan dhamaadka lahayn ee ku habsatey guud ahaan dalkii iyo dadka soomaaliyeed. Sheekhu waxaa uu hadalkiisa ku bilaabay su` aal isagoo leh;Yaa ii sheegi kara waxa ay dadka soomaaliyeed ugu baahi badan yihiin maanta? Nolol wacan, baabuur, xoolo, tacliin? Shiikhu isagoo su`aashaas ka jawaabaya ayuu yiri : waxaa ay dadku ugu baahi badan yihiin ISCAFIS IYO INEY TOOBADKEENAAN. Dadku waa isdulmiyeen, waa isdileen, waa isdhaceen, waxaa ay sameeyeen xadgudub aad u weyn. Waxaa ay meel kaga dhaceen dalkoodii, diintoodii, naftoodii, caruurtoodii iyo sharaftoodii. Waxaa baaba`ay dalkii iyo dadkii soomaaliyeed. Dadkii waxaa ay noqdeen wax gaajo laysay, wax xabadi laysay, wax badu laqdey, wax saxaaraha ku dhintay, wax soo qaxay oo yurub ku dhex milmay. Waxaa dhacday dhibaato baahsan oo aan lasoo koobi karin. Waxaad maqashaan maalin walba; halkaas waxaa ku dhintay 20 qof oo rajid ah, halkaas waxaa ku dhintay 30 qof oo rayid ah, meeshaas waxaa lagu diley 40 oo rayid ah: Haddaba dadka rayidka ahi soow shicibkii soomaaliyeed ma aha. Soow maatadii soomaaliyeed oo dhamaaneysa maaha. Sow caruurtii soomaaliyeeed maaha, Bal qof walbow arrinkaas ka feker. Muddo ku dhow 30 sano ayaa dhibkaasi socdaa. Masiibadu meelna ma aaney dhaafin, xitaa dadkii soo qaxay oo qurbaha soo galay ayey haysataa. In badan oo ka mid ah qoysaskii soomaaliyeed ee qurbaha joogey ayaa kala tegey, taasoo dhalisay in caruurtii ay waayaan gacan qabashadii ay uga baahnaayeen labadooda waalid oo wadajira. Caruurtii iyo dhalinyaradii ayaa waxaa in badan oo ka mid ah ka dhumay dhaqankii iyo hidihii suubanaa ee diinta ku saleysnaa. Faca labaad ama caruurta ku barbaaray qurbaha waxaa ay noqdeen in badan oo ka mid ah kuwo aan lahayn wax dhaqan ah iyo dareen ay u hayaan dalkii soomaaliyeed. Qaar waa Iswiidhish, qaar waa maraykan, qaar waa fiinish, qaar waa talyaani. Waxaa lagu kala milmay meelahaas la joogey. Waa arin run ahaantii aad iyo aad looga naxo.ayuu ku celceliyey sheekhu.. Sh. Maxamed Idriis waxaa isagoo ay qiiro ka muuqato uu yiri; Soomaalidu waxaa ay u baahan tahay CAFIS. Waa inaan ugu horeyn denbiga aan galay qiranaa, ka dibna Waa inaan banaanka usoo baxnaa , gacmaha kor u taagnaa oo aan ilaahii ina abuuray u toobad keenaa.” Dardaaran Sh. Maxamed Idriis waxaa uu magaalo kasta oo uu tago usoo jeedinaayey dardaaran iyo wacyi gelin. Sheekhu isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri. “ War caqabadii iyo fekerkii ina baabi ìyey waa idinla socdaa, xitaa kuwiina halkaan yimid ee qurbaha jooga. Qaar baa qalbiga kala socda oo farxa kolkii mid ay isku reer ama isku xisbi yihiin uu dhib geysto, waana niyad xumaadaa kolkii reerkiisa wax la yeelo. Qaarbaa dhaqaale ku bixiya fidnada soomaaliya ka socota ,qaarbaa caqli ku bixiya, qaarbaa aqoontooda kaga qayb qaata dhibta. Taasi waxaa ay keentay in dhibkii uu meel walba oo soomaali ay joogto uu soo cagadhigtay. Haddaba walaalayaal ilaahii idin abuurtay ka baqa oo naftiina iyo ubadkiina badbaadiya. Wakhtiga aad ku dhumisaan reer hebel baa la eryoodey, iyo xisbi hebel baa meel qabsaday, iyo qoladaas baan baabiìnay waa inaad gelisaan naftiina iyo caruurtiina. Kan la dilayaa waa soomaali, dhulka baaba`aayaa waa dhulkeenii, magaalada la gubayaa waa magaalo soomaaliyeed. War hala fekero, oo caqligu ha shaqeeyo. Waxaa kale oo shiikhu dadka kula dardaarmay iney tusaale fiican u noqdaan dhaqanka wanaagsan ee islaamka. Dhaqamada xun-xun oo meelo badan oo qurbaha ah ka jira sida khiyaanada wadamada aad joogtaan la khiyaaneynaayo, kala noolaanshaha reerka isqabaa kala nool yihiin ( seprates) iwm waa in laga fogaadaa ayuu yiri shiikhu. Kuwa soomaaliya weli dhibta ka wada ee dibadaha idiinku yimaada waa inaad ka fogaataan, waa inaad tiraahdaan “ Naga taga, dalkii ayaan idiinka soo tagnay, weli mana dabasocotaan, ordaya oo naga taga” Walaalayaal ka faaìideysta fursadaha aad haysataan, wakhti geliya caruurtiina. Waa inaad isku daydaan inaad wax noqotaan oo aad samaysataan iskuulo iyo xanaanooyinka caruurta si aad idinku ciyaalkiina u haysataan. Wadamadaan reer galbeedka ma adka in dadku is abaabulaan oo ay iskuulo islaami ah iyo xanaanooyin kala duwan ay furtaan. Ka faaìideysta aqoonyahanadiina iyo waxgaradkiina, waa inaad isku tashataan. Waa inaad ka gudubtaan qolo-qolo iyo kala qoqobnaan, waa inaad u gudubtaan isku duubni iyo inaad diintiina ilaashataan. Sheekhu waxaa kale oo uu yiri “ War hadii aydinaan ka maarmin qabyaalada oo aydinaan iska deyn karin, war bal hakiya ama “ Pause” ha lagu sameeyo inta aad halkaan joogtaan. War qabyaalad iyo kala qaybsanaan meel laguma gaaro ee ilaahay ka baqa, iscafiya oo ilaahay u toobad keena. Rabi toobada waa aqbalaa! Ayuu hadalkiisii kusoo xiray sheekhu. Muxaadaradaas qiimaha leh ka dibna waxaa sheekha iyo xubnihii la socdey u sii gudbeen magaalada Norrköping halkaas oo ay ku qaban doonaan muxaadarooyin tan la mid ah, ka dibna waxaa ay u sii gudbi doonaan magaalooyinka Borlänge iyo Gävle. Intaas ka dib sheekhu waxaa uu kusoo laaban doonaa magaalada Stockholm isagoo haddana usii dhaqaaqi doona xagaas iyo wadanka Danmark. Waxaan marwalba idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan safarka-dacwada ee sheekh maxamed Idriis. Meel walba oo sheekhu tagona waxaan ka soo qori doonaa insha allah warbixino kooban. Haddaba la soco Safarka dacwada Sheekh Maxamed Idriis. Mahadsanidin Waxaa diyaariyey: C/risaq Maxamed Xuseen Eskilstuna, Sweden habdirisak@hotmail.com
Sheekh Maxamed Idriis oo booqanaya magaalooyin badan oo Iswiidhan ah
Ugu horeyn mahad oo dhan Ilaah baa leh Nabad iyo Naxariisina Nebigeenna Korkiisa ha ahaato. Waxaa booqasho ku jooga wadanka Iswiidhan sheekha soomaaliyeed ee caanka ah, waa Sheekh Maxamed idriis. Sida lala wada socdo shiikhu waa daaci, waxaana uu tagaa meelo kala duwan oo dunida daafaheeda kala duwan ah. Meelahaas oo uu kusoo booqdo guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaana dadka soomaaliyeed. Wadamadii ugu dameeyey ee uu sheekhu soo marayna waxaa ka mid ahaa Kenya, koonfur Afrika, Sucuudi carabiya, Maleeshiya,Norway iyo Finland. Haddaba sida aan kor kusoo sheegnay wakhtigaan xaadirka ah ( 18/5, 2011) waxaa uu sheekh Maxamed Idriis joogaa wadanka Iswiidhan. Sheekha oo ay la socdaan xubno ka mid ah maamulka masjidka soomaalida ee Stockholm ayaa waxay taariikhda u dhexeysa 14-19 ka maj, booqdeen magaalooyin badan oo Iswiidhan ah. Magaalooyinkaas oo ku kala yaala koonfurta, galbeedka, bartamaha iyo waqooyiga dalka Iswiidhan.
Meelaha ay beryahaan cagta soo mariyeen waxaa ka mid ah Göteborg, Malmö, kristianstad, Falkenberg, Borås, Jönköping, Gislaved, Eskilstuna, Norrköping, Borlänge iyo Gävle.. Muddo shan beri gudahood ah ayaa shiikha iyo xubnaha la socdaa waxaa ay isu mareen dhamaan magaalooyinkaas aan kor ku soo sheegnay. Magaalooyinkaas oo run ahaantii aad iyo aad u kala fog. Magaalo kasta oo ay tagaana waxaa ay ku qabanayeen muxaadarooyin kala duwan oo dadka xaqa loogu sheegaayo laguna wacyi gelinaayo muhiimada ay leedahay isku duubnida, wax wada qabsiga iyo iney dadka soomaaliyeed iscafiyaan. Dadka soomaaliyeed ee magaalooyinkaas ku noolina si aad ah ayey uga soo qaybgaleen muxaadarooyinka iyo wacyi gelinta uu soo jeedinaayey sheekh Maxamed Idriis.
Magaalada Eskilstuna iyo booqashadii sheekh Maxamed Idriis.
18-ka bisha may 2011 oo ku beegan maalin arbaca ah ayaa shiikhu yimid magaalada Eskilstuna oo ilaa 114 km u jirta caasimada Stockholm. Shiikha waxaa soo dhoweeyey xubno ka socda masjidka Eskilstuna, waxyar oo nasasho ah ka dibna waxa shiikhu tegey masjidka weyn ee faras magaalaha Eskilstuna, halkaas oo ay ku sugnaayeen muslimiin badan oo isugu jirey soomaali iyo jinsiyado kaleba. Shiikhu waxaa uu dadka tujiyey salaadii casarka. Kolkiii la tukadey salaadana waxaa si toos ah u bilaabatay muxaadaradii shiikhu ugu talo galay dadka soomaaliyeed ee reer Eskilstuna. Ugu horeyn waxaa shiikhu muxaadaro gaaban ku jeediyey afka carabiga maadaama taas oo ay codsadeen walaalaha muslimiinta ah ee ku hadla afka carabiga. Intaas ka dib waxaa si toos ah u bilaamay muxaadaradii la sugaayey ee ku baxaysey afka soomaaliga. Muxaarada waxaa si toos ah loogala socdey aalada Palk-ga. Taas oo suurto gelisey in dad badan oo soomaaliyeed oo jooga dunida daafaheeda kala duwan ay ka faaìideystaan casharadaan uu soo jeediyey sheekh Maxamed Idriis.
Muxaadarada shiikhu uu ka jeediyey Eskilstuna waxaa ay taabaneysey meelo kala duwan oo nolosha ah sida in dadku is cafiyaan ,qurbaha iyo dhibaatooyinka yaala, waxqabadka dadka, midnimda iyo iskuduubnisa, dhibta aseebtay soomaaliya iyo doorka qurbajooga, Toobada iyo shuruudaheeda iyo waxyaalo kale oo badan. Waxaan halkaan kusoo koobayaa waxyaalihii uu shiikhu ka hadlay.
Waa in dadku toobadkeen la yimaadaan: Toobadkeenku waxaa uu leeyahay afar shuruudood oo muhiim ah, waana in qofku oofiyaa shuruudahaas si toobadiisu ay u noqoto mid la aqbalo
1. Qofku waa inoo denbiga ka joogaa; waa inaan qofku teebadkeenka dib u dhigin maxaa yeelay lama oga wakhtiga nafta loo imaanaayo. Waa inuu danbigii qofku ku jirey uu halkaas ku joojiyaa, kana baxaa.
2. Qoomamayn: Waa in qofku ka qoomameeyaa danbigii uu galay, waa inuu shalaayaa arinkaas denbiga ah ee uu falay. Qoomamayntu waa toobad ayuu yir rasuulka nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee.
3. Qalbiga oo aad ka goàansato inaadan danbigaas dib ugu noqon doonin.
4. Haddii waxa aad ka toobad keeneysaa uu yahay xaq dad leeyahay waa in qofku celiyaa ama uu masaabax dalbadaa. Ilaahay waa cafiyaa haddii la weydiisto toobad khaalis ah.
Dhibta soomaalida haysata- ilaahay aan u toobad keeno!!
Shiikhu waxaa uu aad u iftiimiyey dhibaatada aan dhamaadka lahayn ee ku habsatey guud ahaan dalkii iyo dadka soomaaliyeed. Sheekhu waxaa uu hadalkiisa ku bilaabay su` aal isagoo leh;Yaa ii sheegi kara waxa ay dadka soomaaliyeed ugu baahi badan yihiin maanta? Nolol wacan, baabuur, xoolo, tacliin? Shiikhu isagoo su`aashaas ka jawaabaya ayuu yiri : waxaa ay dadku ugu baahi badan yihiin ISCAFIS IYO INEY TOOBADKEENAAN.
Dadku waa isdulmiyeen, waa isdileen, waa isdhaceen, waxaa ay sameeyeen xadgudub aad u weyn. Waxaa ay meel kaga dhaceen dalkoodii, diintoodii, naftoodii, caruurtoodii iyo sharaftoodii. Waxaa baaba`ay dalkii iyo dadkii soomaaliyeed. Dadkii waxaa ay noqdeen wax gaajo laysay, wax xabadi laysay, wax badu laqdey, wax saxaaraha ku dhintay, wax soo qaxay oo yurub ku dhex milmay. Waxaa dhacday dhibaato baahsan oo aan lasoo koobi karin.
Waxaad maqashaan maalin walba; halkaas waxaa ku dhintay 20 qof oo rajid ah, halkaas waxaa ku dhintay 30 qof oo rayid ah, meeshaas waxaa lagu diley 40 oo rayid ah: Haddaba dadka rayidka ahi soow shicibkii soomaaliyeed ma aha. Soow maatadii soomaaliyeed oo dhamaaneysa maaha. Sow caruurtii soomaaliyeeed maaha, Bal qof walbow arrinkaas ka feker. Muddo ku dhow 30 sano ayaa dhibkaasi socdaa. Masiibadu meelna ma aaney dhaafin, xitaa dadkii soo qaxay oo qurbaha soo galay ayey haysataa. In badan oo ka mid ah qoysaskii soomaaliyeed ee qurbaha joogey ayaa kala tegey, taasoo dhalisay in caruurtii ay waayaan gacan qabashadii ay uga baahnaayeen labadooda waalid oo wadajira. Caruurtii iyo dhalinyaradii ayaa waxaa in badan oo ka mid ah ka dhumay dhaqankii iyo hidihii suubanaa ee diinta ku saleysnaa. Faca labaad ama caruurta ku barbaaray qurbaha waxaa ay noqdeen in badan oo ka mid ah kuwo aan lahayn wax dhaqan ah iyo dareen ay u hayaan dalkii soomaaliyeed. Qaar waa Iswiidhish, qaar waa maraykan, qaar waa fiinish, qaar waa talyaani. Waxaa lagu kala milmay meelahaas la joogey. Waa arin run ahaantii aad iyo aad looga naxo.ayuu ku celceliyey sheekhu..
Sh. Maxamed Idriis waxaa isagoo ay qiiro ka muuqato uu yiri; Soomaalidu waxaa ay u baahan tahay CAFIS. Waa inaan ugu horeyn denbiga aan galay qiranaa, ka dibna Waa inaan banaanka usoo baxnaa , gacmaha kor u taagnaa oo aan ilaahii ina abuuray u toobad keenaa.”
Sh. Maxamed Idriis waxaa uu magaalo kasta oo uu tago usoo jeedinaayey dardaaran iyo wacyi gelin. Sheekhu isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri. “ War caqabadii iyo fekerkii ina baabi ìyey waa idinla socdaa, xitaa kuwiina halkaan yimid ee qurbaha jooga. Qaar baa qalbiga kala socda oo farxa kolkii mid ay isku reer ama isku xisbi yihiin uu dhib geysto, waana niyad xumaadaa kolkii reerkiisa wax la yeelo. Qaarbaa dhaqaale ku bixiya fidnada soomaaliya ka socota ,qaarbaa caqli ku bixiya, qaarbaa aqoontooda kaga qayb qaata dhibta. Taasi waxaa ay keentay in dhibkii uu meel walba oo soomaali ay joogto uu soo cagadhigtay. Haddaba walaalayaal ilaahii idin abuurtay ka baqa oo naftiina iyo ubadkiina badbaadiya. Wakhtiga aad ku dhumisaan reer hebel baa la eryoodey, iyo xisbi hebel baa meel qabsaday, iyo qoladaas baan baabiìnay waa inaad gelisaan naftiina iyo caruurtiina. Kan la dilayaa waa soomaali, dhulka baaba`aayaa waa dhulkeenii, magaalada la gubayaa waa magaalo soomaaliyeed. War hala fekero, oo caqligu ha shaqeeyo. Waxaa kale oo shiikhu dadka kula dardaarmay iney tusaale fiican u noqdaan dhaqanka wanaagsan ee islaamka. Dhaqamada xun-xun oo meelo badan oo qurbaha ah ka jira sida khiyaanada wadamada aad joogtaan la khiyaaneynaayo, kala noolaanshaha reerka isqabaa kala nool yihiin ( seprates) iwm waa in laga fogaadaa ayuu yiri shiikhu.
Kuwa soomaaliya weli dhibta ka wada ee dibadaha idiinku yimaada waa inaad ka fogaataan, waa inaad tiraahdaan “ Naga taga, dalkii ayaan idiinka soo tagnay, weli mana dabasocotaan, ordaya oo naga taga”
Walaalayaal ka faaìideysta fursadaha aad haysataan, wakhti geliya caruurtiina. Waa inaad isku daydaan inaad wax noqotaan oo aad samaysataan iskuulo iyo xanaanooyinka caruurta si aad idinku ciyaalkiina u haysataan. Wadamadaan reer galbeedka ma adka in dadku is abaabulaan oo ay iskuulo islaami ah iyo xanaanooyin kala duwan ay furtaan. Ka faaìideysta aqoonyahanadiina iyo waxgaradkiina, waa inaad isku tashataan. Waa inaad ka gudubtaan qolo-qolo iyo kala qoqobnaan, waa inaad u gudubtaan isku duubni iyo inaad diintiina ilaashataan. Sheekhu waxaa kale oo uu yiri “ War hadii aydinaan ka maarmin qabyaalada oo aydinaan iska deyn karin, war bal hakiya ama “ Pause” ha lagu sameeyo inta aad halkaan joogtaan. War qabyaalad iyo kala qaybsanaan meel laguma gaaro ee ilaahay ka baqa, iscafiya oo ilaahay u toobad keena. Rabi toobada waa aqbalaa! Ayuu hadalkiisii kusoo xiray sheekhu.
Muxaadaradaas qiimaha leh ka dibna waxaa sheekha iyo xubnihii la socdey u sii gudbeen magaalada Norrköping halkaas oo ay ku qaban doonaan muxaadarooyin tan la mid ah, ka dibna waxaa ay u sii gudbi doonaan magaalooyinka Borlänge iyo Gävle. Intaas ka dib sheekhu waxaa uu kusoo laaban doonaa magaalada Stockholm isagoo haddana usii dhaqaaqi doona xagaas iyo wadanka Danmark.
Waxaan marwalba idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan safarka-dacwada ee sheekh maxamed Idriis. Meel walba oo sheekhu tagona waxaan ka soo qori doonaa insha allah warbixino kooban.
Haddaba la soco Safarka dacwada Sheekh Maxamed Idriis.
May 20, 2011 at 07:15
asc mashallah waaxaan ad aiyo ad ugu faraxsanahay sheekhena o noo yimid allah waxaan ugu baryayaa in u siiyo cimri dheer iyo cibaado suuban shekha wuxuu u shaqeeyaa diinta islamka allah ajar an la koobi karin allaha ka siiyo
May 20, 2011 at 10:24
Asc , Sheekha Allaha dhawro e waxaa uu noo jeediyay M,uxaadarooyin Qayim ah , wallaahi quluubta dadka gilgishay , waxaana uu farta naga saaray Furihii NABADA ee meeyay dadkii qaadan lahaa , Insha’Allah magaaladeena waxaan dhahbnay Samicnaa wa Adacnaa Yaa Sheeikha , waana dhaqangilinaynaa , guud ahaana 3000 kun ayaan nahay Hal Jaaliyad ayaana leena Alle mahadii , si wanaagsan ayaana isugu duubana . Xaqiiqdii Hadii Soomaali wada maqli lahayd muxaadarooyinkii Sheekha ee MIDNIMADA ka hadlaayay ee ay Qaadan lahaayeen Saacadaa ayaan Nabad ku waari lahayn .
Somalaay Midnimada , War midnimada . War Qurbaha iyo Qaxarkaan Qool daraa na biday .
A.S.C mashaa allh aad ayaan ugu faraxsanahay imatanka sheekh ee dalkan sweden ilaah ajar iyo xasanad haka siyo sucodkisa iyo wanaga u uso socdalay
aad iyo ayaan ugu faraxsa nahay shiikh maxamed idiriis imatinkisa sweden kheyr allaha siiyo annagana allaha nagu anfaco kheyrka ow noo sheegay
Asalaama caleykum, dhamaantiin. Gaar ahaan waxaan mahadcelin u jeedinayaa bahda somaliska.com
Shiikheena Sh.maxamed Idriis, waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo dadaalka aad ku bixineysid dadka soomaaliyeed ee meel walba ku daadsan. Dadku waxaa ay baahi u qabaan diinta, waxaa ay u baahan yihiin wacyi gelin iyo baraarujin. Ilaahay dhamaanteen ha inaga yeelo kuwii wax ku qaata ee ka faaiideysta cilmiga iyo duruusta uu sh.maxamed idriis soo jeedinaayo. Waxaan aad ula yaabay inta magaalo ee sheekha iyo gudiga masjidka stockholm ay mareen mudada gaaban. reer stockholm ajar baad shaqaysateen. ilaahay ha idiin aqbalo. Ugu damayn waxaan u mahad celinayaa qoraaga maqaalka, mudane c/risaq, Eskilstuna.oo runtii qora maqaalo aad iyo aad u qiimo badan, ajar iyo xasanaad ilaahay hakaa siiyo adigana.
Ilaahay shiikha kheyr ha siiyo , janadiina haka waraabiyo.howl kheyr ayaad wadaan. dhalinta la shaqayneysa shiikhana ilaahay ajar ha siiyo.
May 20, 2011 at 22:50
Allah ha kisiiyo ajar iyo xasanaad, wuuna ku mahad sanyahay waqtiga qaaliga ah ee u nohibeyay walaalken sheikh maxamed idiris, janadatul fardowsa ilahay haku manesto amin amin amin Ya Rabi